Cayaartooyda Jaaliyadda Melbourne oo ka adkaaday Xulka Kubadda Cagta ee Gobolka Benaadir “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Garoonka Benaadir Stadium ayaa waxaa caawa cayaar saaxibtino ku dhexmartay cayaartooy ka socotay Jaaliyadda Soomnaaliyeed ee Wadanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne iyo Xulka kubadda cagta ee Gobolka Benaadir, kuwaasi oo isu diyaarinaya tartanka kubadda cagta Maamul Goboleedyada ee dhawaan ka furmaya magaalada Kismaayo.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadi ahna duqa Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed iyo mas’uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ayaa ka qeyb galay cayaarta oo ka dhaceysay garoonka kubadda Cagta Koonis ee Degmada C/casiis.
Sidoo kale waxaa cayaarta caawa u soo daawasha tegtay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Benaadir.
Labada dhinac ayaa garoonka ku soo bandhigay cayaar aad u wanaagsan oo soo jiidatay dhamaan dadkii ka qeyb galay, waxaana waqtigii loogu talaglay ay ku soo idlaaday bar bar dhac 0-0.
Labada koox ayaa loo dhigay min shan rigoore, iyadoo kooxda Melbourne ay tuurteen 5 rigoore balse ay iska lumiyeen hal oo kaliya, waxaana ay shabaqa ku hubsadeen 4 rigoore, si taa la mid ah Xulka Gobolka Benaadir ayaa tuurtay 5 rigoore, waxaana ay shabaqa ku hubsadeen 3 balse ay iska qasaariyeen labo, taasi oo ay ku dhamaatay 4-3 rigooreyaal.
Xuquuqda sawirada: Cabdiraxiin Maxamed Maxamud Kismaayo
Urur dhallinyaro ah oo u istaagay wacyi gelinta bulshada